Carnelian - chalcedony casaan casaan-guduudan - muuqaal ah
Tags sardiyos, chalcedony
Ka iibso dukaankeena dabiiciga ah 'carnelian dabiiciga' ah
Carnelian waa mid cad oo u eg translucent guduudan-bunni oo kala duwan oo chalcedony ah. Xariiqeedkeedu wuxuu u kala duwanaan karaa midabka midabka cagaarka ah, ilaa midab madow oo aad u daran. Waxay lamid tahay carnelian waa sard, oo bunni ah halkii casaanka.
Si la mid ah carnelian waa sard, kaas oo guud ahaan ka adag oo mugdi ah. Farqiga si adag looma qeexin. Waxaan u isticmaali karnaa labada magac si isweydaarsi leh. Carnelian iyo sard labaduba waa noocyo u eg chalcedony macdanta silica. Waxay ku midabaysan tahay cilaaqaadka macdanta birta. Midabku si weyn ayuu u kala duwanaan karaa, oo u dhexaysa laga bilaabo oranjiga midabka casaanka ah ilaa midab madow oo aad u daran.
Nooc microcrystalline ah oo ah silica, kana kooban jajabyo aad u fiican oo ah rubuc iyo moganite. Kuwani waa labadaba macdanta "silica", laakiin way ku kala duwan yihiin in quartz uu leeyahay qaab dhismeedka kristalional, halka moganite uu yahay monoclinic. Waa qaab-dhismeed kiimiko oo caadi ah, kuna saleysan qaab-dhismeedka kiimikada ee 'quartz', waa silikon dioxide.
Chalcedony wuxuu leeyahay luster ur leh oo laga yaabo inuu yahay semitransparent ama translucent. Waxay u qaadan kartaa midabbo badan oo kala duwan, laakiin kuwa inta badan la arkaa waa caddaan ilaa cawlan, buluug cirro leh ama hooska buluugga ah oo u dhexeeya cirro ilaa madow. Dhagxaan badan oo lagu iibiyo suuqyada ayaa maray daaweyn iyaga oo lagu sifeeyo ama kululeeya si midabkooda loo beddelo.
Chalcedony waxaa mar loo maleynayay inuu yahay noocyo badan oo mugdi ah oo "quartz cryptocrystalline quartz" ah. Goor dhowayd si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanay inay sidoo kale ku jirto polymorph monoclinic-ka ah 'quartz'. Waxaa loo yaqaanaa moganite. Jajabka, marka loo eego tiro ahaan, moganite gudahood muunadda caadiga ah ee loo yaqaan 'chalcedony sample' way kala duwanaan kartaa in ka yar 5% illaa ka sarreysa 20%. Jiritaanka moganite waxaa mar loo qaddariyo inuu yahay mid laga shakisan yahay. Laakiin hadda si rasmi ah ayey u ogtahay Ururka Caalamiga ah ee Macdanta.
Chalcedony wuxuu ka jilicsan yahay kalluunka 'cryzalline' oo hoos timaad xaaladaha heerkulka hooseeya, in kasta oo labada macdan ay isku mid yihiin. Tan waxaa loo malaynayaa inay tahay sababta oo ah chalcedony si aad ah ayey uhadhsantahay cryptocrystalline. Oo sidaas oo kale waxay leedahay bed dusha oo aad u sarreeya ilaa cabirka mugga. Waxay umuuqataa in cufnaanta sare ay sabab u tahay walxaha moganite.